Jananinepal.com‘अहिले जनप्रतिनिधि प्रति जनताको भरोसा बढ्ने गरी कामहरु गरेका छौ’ - Jananinepal.com
बिश्व नै यतिबेला कोरोना भाइरस महामारीको कारण त्रासदीको अवस्थामा छ । नेपाल पनि अछुतो रहेन । यस विकराल अवस्थामा समग्र देश कोरोना महामारी नियन्त्रणको अभियानमा केन्द्रित छ । तीन तहका सरकारहरु सबै कोरोना नियन्त्रणको महाअभियानमा होमिएका छन् । असारको समय कृषकहरु कृषि काममा लागेजस्तै स्थानीय तह पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट व्यवस्थापनमा व्यस्त छन् । यसै प्रसँगमा जननी नेपालका अनिश शर्मा गैरेले गल्कोट नगरपालिकाका विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेक वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष विरजँग भण्डारी सँग नगरपालिकाका आगामी बर्ष आउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नु भएको छ ।
१.गत आर्थिक बर्षको बजेट खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ?
असार मसान्त सम्मको कुरा गर्नुपर्दा करिब करिब सत प्रतिशत नै बजेट खर्च गर्याै । हाम्रो वडले पनि ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वडाका सबै योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । वडाका सबै योजना सम्पन्न हुँदा केही नमुना कामहरु पनि सम्पन्न गर्याै । गत आर्थिक बर्ष राम्रो भयो, आउने आर्थिक बर्षलाइ अझै बढी मिहेनत गर्ने सोच गराएका छौ ।
२.अघि नमुना कामहरुको कुरा गर्नुभयो, चालु आवमा मुख्य के कस्ता कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए ? छोटकरीमा जानकारी गराउनुन ?
सर्वप्रथम त हाम्रो नगरपालिकाको नाम राखेको गल्कोटको ऐतिहासिक गल्कोट कोतघरको व्यवस्थापन गरेका छौ । यसलाइ हामी नगरकै गौरबको योजनामा राखेर कामहरु गरेको हौ । यसको जग्गा व्यवस्थापन गर्याे । त्यसको साथै कलात्मक ढुँगा प्रयोग गरी १ सय मिटर सिढी निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी खानेपानी र शौचालय पनि बनेको छ । अब यस क्षेत्रमा पर्यटकहरुको आगमन हुने हाम्रो अपेक्षा छ र यसको आकर्षणको निम्ती अझै केही काम हामी गर्दै छौ । त्यसैगरी नेपालकै संभवत अग्लो १२० केजी सहितको ७फिट अग्लो तरवार भाला, बनाउँदै छौ । अर्काे काम हामीले पर्यटन सँग सम्बन्धीत क्यानोनिँगमा गरेका छौ । बिगत केही बर्षदेखी र म वडाध्यक्षको रुपमा आएपछि गल्कोट ३ मा क्यानोनिँगको प्रवद्र्धन गरीरहेका छौ । र यसमा नीति क्षेत्रलाइ दिएर व्यवसायिक रुपमा चलाउँदै छौ । गल्कोटका सडकहरुको कामहरु, लिँक रोड बनाउने काम, कृषि क्षेत्रमा समहु बनाएर ६ सय बढी टिमुरको बोटहरु रोपण गरेका छौ ।
३.वडा कार्यालयको भवन निर्माणको बिषयमा के हुुँदै छ नी ?
हालसम्म हामी भवन निर्माणको लागि जग्गा बनाएका छौ । काम सञ्चालनको लागि शिवालाय भएको ठाँउमा रहेको एउटा भवनलाइ प्रयोग गरीएको छ । आफ्नो अफिस बनाउने काम पनि चाँडै सुरु हुन्छ । अहिले विश्वभर महामारीको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरसले बिकास निर्माणका कार्यक्रममा के कस्ता समस्या देखिए त ? यस महामारीको कारण सुरुवातमा समस्या भएकै हो । तर अहिले भने हामी लोकल लेवरहरु नै प्रयोग गरेर काम गर्याै । खास्सै समस्या छैन ।
४.अबको बजेट कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
कोरोना भाइरसकले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा ठुलो कुरा सिकाएको छ । हामी नेपालीको अरुमा भर पर्ने बानी छ । त्यो हटाउनु पर्ने सन्देश यसले दियो । त्यसैगरी ठुलो मात्रामा वैदिशक रोजगारीमा भर पर्ने बानी पनि अब केही मात्रामा कम हुने विश्पास मैले लिएको छु । यसको लागि वडा भित्र हामीले लघु उद्योग मा दिएका छौ । टोलहरुमा समुह बनाएर काम गर्ने योजना छ । नागरीकलाइ प्रत्यक्ष आम्दानी सँग जोड्ने र दैनिक उपयोग हुने बिषयबस्तुमा उनीहरुलाइ पुर्याउने गरी काम अब गर्छाै । नुमना काम भनेर लागेको क्यानोनिँगको प्रबद्र्धन, ऐतिहासिक कोतघरलाइ पुनर्निमाणको तयारी लगायतमा पनि बजेट केन्द्रित छ । वडाको आवश्यकता र स्थानीयकोे मागको आधारमा बजेट ल्याउँदैछौ ।
५. देशनै यतिबेला कोरोना महामारी सँग लडिरहेको छ । यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भनेका सार्वजनिक स्वास्थय संस्था नै देखिए । र हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग जस्तै भो । यो अवस्थामा अबको कार्यक्रमले के व्यवस्था गर्ला ?
एकदम राम्रो प्रसँग ल्याउनु भयो । हामीले यसैबर्षबाट हटिया स्वास्स्थ्य चौकीमा ल्याब सञ्चालनमा ल्याएका छौ । त्यसमा नया प्रविधि ल्याउने तैयारी पनि छ , बिपत्तीले स्वास्थ्यमा कती कमजोर छौ भन्ने देखाएको कारण अलिक बढी फोकस स्वास्स्थयमा गर्नै पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन र उनीहरुको क्षमता बृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्थापन गर्ने छौ ।
६.हटिया बजार प्रत्येक बर्ष बाढीको चपेटामा पर्दैै आएको छ । यसमा वडाको ध्यान कसरी परेको छ ?
अघिल्लो बर्षको बाढीले तहसनहस बनाएको हो । केही घरमा क्षती पुग्यो । त्यसैगरी हटिया बजारको सबै ठाँउमा तडबन्द बनाएका छौ । प्रदेश सरकार सँगको समन्वयमा १२ सय जाली तडबन्द भइरहेको छ । त्यसैगरी करिब ४ सय क्षेत्रमा तडबन्दको कार्यक्रम छ । ठुलै समस्या आएको खण्डमा त तडबन्धले पनि केही हुन सक्दैन । तर पोहोरको जस्तो बाढीले अब केही नगर्ला भनेका छौ । यो समस्या खासगरी आम मानिसहरुले पनि नदी किनारको जग्गा च्याप्ने कारणले पनि जोखिम बनेको हो । यसमा नगरपालिकाले नियम कानुन बनाएर अनुगमन गर्ने पनि भनेको छ ।
७.अब धेरै नागरीकहरु विदेश बाट फर्कने योजना हुनसक्छ । उनीहरुलाइ रोजगार बनाउने योजना के छ ?
हामीले सोचिरहेका छौ । धेरैको रोजगारी यसपाली गुमेको छ । र उहाँहरुको आर्थिक उपार्जनको मेसो स्थानीय तहले गर्छ । यसमा हामीले उनीहरुको आम्दानी बृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउँदै छौ । व्यवसायमा लाग्नेहरुको लागि अनुदान लगायतका सबै खाले सहयोगहरु हामी गर्ने छौ । विदेशमा आफुले सिकेको सीप र अनुभवलाइ हामी स्थानीय तहले प्रयोग गर्छाै । नागरीकको सीप र क्षमतानुसारको काम गर्न हामी तत्पर हुनेमा म सबैलाइ विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु ।
८. अन्त्यमा, वडा नम्बर ३ लाइ नमुना वडा बनाउको निम्ती तपाइले गरेका कामहरु के के हुन?
नमुना बनाउने सवालमा मेरो नेतृत्वले धेरै कुरा गरेको मैले मानेको छु । तीन बर्षको अवधिमा शिक्षा र स्वास्थय क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । हटिया स्वास्थ्य चौकी सुरक्षीत प्रसुती सेवामा बाग्लुङ्ग जिल्लामै अब्बल घोषित भएको छ, आम मानिसमा जनप्रतिनिधि प्रति विश्वास जाग्ने बाताबरण बनेको छ । स्वास्स्थ्य चौकीमा उपकरणहरु, बजारमा नाँगो तार हटाउने काम, उद्योग वाणिज्य संघ संगको सहकार्यमा हटिया बजारमा सिसि क्यामरा जडान, सडक बत्ती, पहिलो पटक क्यानोनिँग खेल सञ्चालन, बाल बिकास केन्द्रलाइ व्यवस्थापन, कोतघरको संरक्षण, फुल खेतीलाइ व्यवसायिकरण, कृषि समुह मार्फत उत्पालनमा जोड दिएका छौ । यी कामहरुले हामीलाइ नमुना बनाउनमा मद्धत पुगेको मैले मानेको छु ।
जननीनेपाल सँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभएकोमा धन्यवाद ।